Beri baan nin soomaaliyeed oo igu cusbaa la sheekaystay. Cabbaar ka dib waxaan weydiiyey bal in uu yaqaan soomaali kale oo aan isagana markaa ka hor dal kale ku bartay. Haa, ninkaas waan aqaan, ayuu iigu jawaabey. Runtii labada nin isuma ay egayn isku degaanna kama ay iman, waxa keliya ee ka dhexeeyeyna waa in ay beri markaa aad uga horreeyey isyaqaanneen. In ay isyaqaanneen sida aan ku gartay waa iyaga oo aad isugu hadal egaa. Labadooda ka dambe, oo ahaa ka da yar, marka uu hadlayo ereyada uu adeegsado iyo guud ahaan sida uu u dhaqmaa waxay ahayd sidii ka hore oo tabtii ah. Labada ka hore ayaa da weynaa, ilbaxsanaa oo tacliin sarreeyey. Dabadeed ka yari dhaqanka, gaar ahaan hadalka, ayuu kaga dayday.
Tarjumidda Qur’aanka waxaa raacay tarjumaado kale oo diinta ah. Dhammaantood in kasta oo ay qaladdaad farsamo iyo luqadeed oo aad u badani ku jiraan haddana waa bilaw guul leh oo horumar laga filan karo. Laakiin xataa haddii mas’alada diinta laga tago, carabigu waa af leh xaddaarad culus oo ay ku qoran tahay aqoon aan xaddi lahayni. Haddaba kuwa carabida lagu ibtileeyey maxaa u diiday in ay taa wax ka soo tarjumaan? Galoofnimadooda taas ku saabsan ayaa daliil inoogu filan dantoodu in aanay carabi iyo carabnimo ka sokayn kana shishayn.
Kuwa ingiriisida ku waashay iyagu sida kuwaa hore uma indho adka oo haddii qaladkooda loo tilmaamo ma difaacaan.
Maya, ee waa intuu qofka Eebbe geshaa!
Dhinac kale oo uu afka gaaladu inaga soo galay waa ereyo looga maarmi waayey maamulkii iyo noloshii casriga ahaa ee iyaga laga dhaxlay. Dugsiyada, xafiisyada iyo qalabkii inagu cusbaa badankooda ereyo ingiriisi, talyaani, faransiis ama carabi ah ayaa loo adeegsadey. Weliba taasi waxaa ay u sii darnayd intii aan qorista af soomaaliga iyo ereybixinta la bilaabin. Ereyada ingiriisida inaga soo raacay waxaa ka mid ah: xafiis (office), teeb (type), buug (book), Eerboodh (airport), looyar (lawyer), barafasoor (professor), boolis, bilays (police) i w m.
Cilladda kale ee magacan ku jirtaa waa ereyga “bunt” oo aan wadan magacii ay faraacinadu dhul ama dal u yaqaanneen, kaas oo aanan qudhaydu aqoon. Magaca “land” ee lagu suuxay waa tarjumidda afka saancadka. Tusaale ahaan carabtu magacaa waxay u tarjumatey “Bilaad Bunt”, ummad walibana sida uu ereyga “dhul” afkeeda ku yahay oo ay raacisay “bunt”. Markaa innaga oo ah cidda uu magacu tooska u khuseeyo maxaynu ugu khasban nahay in aynu u qaadanno sida ay reer yurub u tarjunteen?
Labada magac intaa waxaa u dheer iyada oo magaca “land” iyo ka la socda shaqalkooda dheer la gaabiyo, taas oo ingiriisida lagaga dayday. Haddii af soomaali lagu qoro waxay noqonayaan “Soomaalilaand” iyo “Buntlaand”.
Warfaafinta maanta waxaa diyaariya ama tifotira dad badankooda af soomaaliga iyo adeegsigiisa dhibaato ka haysato. Taa waxaa badankooda u dheer aqoon yari ku saabsan cilmiga saxaafadda ee ay faraha kula jiraan. Tusaale ahaan dhammaan magacyada bilaha waxaa si aan dareen lahayn loogu qoraa af ingiriisi: April, June, Augost, September, October, November, December…! Magacyada bilaha ee aynu ku dhaqannaa in ay af yurub ka yimaadeen macnaheedu ma aha in aynu sidooda u qorno, ee waa in ay xarfaha iyo higgaadda af soomaaligu ina hagaan. Magacyadaasi sidan ayey soomaali ku yihiin: abril, juun, ogost, sebtembar, oktoobar, nofembar, disembar...
Qaladdaadka luqadeed ee aan xadka lehayn waxaa ka mid ah magacyo badan oo soomaali ah iyo guud ahaan dalalka dunida oo af qalaad lagu qoro. Bal arrimahan u fiirso: Aden (Aadan), Abdullahi (Cabdullaahi), Hargeisa (Hargeysa), Mogadishu (Muqdisho), Djibouti (Jabbuuti), Ethiopia (Itoobbiya), Germany (Jarmal), Japan (Jabbaan), China (Shiine) Europe (Yurub)...
Wargeys daabacan oo maanta af soomaali ku soo baxa, inta aan anigu og ahay, waxaa ugu af dheer Jamhuuriya, kaas oo ka soo baxa Hargeysa. Isagana af ingiriisida iyo soomaaliga ku qorani aad uma kala badna. Fikradaha iyo macluumaadka uu akhristaha u soo gudbiyaa kama duwana waxii lagu qori jirey Xiddigta Oktoobar. Kala duwanaanta keli ahi waa kii hore oo si buuxda gacanta xukuumadda ugu jirey iyo Jamhuuriya oo ka madax bannaan. Laakiin haddana xorriyadda feker ee uu isagu isa siiyey ayaa aad u xaddidan. Tabtii Xiddigta Oktoobar ayuu Jamhuuriya garashada akhristaha liidaa oo hafraa. Tabtii Xiddigta Oktoobar ayuu filashada akhristaha ka sokeeyaa ama ka weecsan yahay. Magaca wargeyska ee aan sidiisaba soomaaliga ahayn ayaa quus inoogu filan.
Hadal halabuur qoraal isugeyn
Koonfur 4 4 5 13
Waqooyi 5 4 3 12
Galbeed 5 4 1 10
Jabbuuti 2 3 0 5
NFD 2 1 0 3
QORAALADII HORE EE IBRAAHIN YUUSUF